WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: Mr Ye Htut - FB Post
Mr Ye Htut - FB Post
The following is untitled post from U Ye Htut's FB account.
I am just wondering why Singapore Institute Employs this person?
Are there any benefits for Singaporeans and global community?
ပီးခဲ့ ငါးရက်မှာ ရခုိုင်နုိုင်ငံရေးသမား၊ အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်း၊ ရခုိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့ ပရဟိတသမား စသည်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးဥိးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ သူ အထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတယ်။ မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အသက် ငါးဆယ်ကနေ ကိုးဆယ်ကျော်အထိပါတယ်။
သူတို့မှာ ရခုိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကွဲပြားတဲ့ အမြင်တစ်ချို့ရှိပေမယ့် အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ သဘောထားနဲ့ ခံစားချက် ကတော့
၁။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို လုံးဝလက်မခံနုိုင်ဘူး။
၂။ လွတ်လပ်ရေးရထဲက အစိုးရအဆက်ဆက် ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေကို ပစ်ပယ်ထားတယ်။ ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။
၃။ မူဂျာဟစ်၊ အာရ်အက်စ်အို၊ အာဆာ စတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ တိုက်ခိုက်မှု ရှိလာရင် တပ်တွေရောက်လာတယ်။ တုိုက်တယ်။ ပြီးရင် ပြန်ရုပ်သွား တယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလုံခြုံမှုရှိအောင် အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်မပေး နုိုင်ဘူး။
အဲဒီသုံးချက်အထဲမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆက်ဆက်က ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေကို ပစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အစိုးရက လုပ်မပေးနုိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ပြည် ထောင်စု အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
895 Ye Moe and 894 others
Bo Than တခြား အစိုးရ လက်ထက် ဒီလောက် မဆိုးဘူး Nld လက်ထက်ကျ မှ နွားကုလားတွေ ဂြိုလ်ပိုကြွလာတယ် ဒါဟာ စုကြည် မပြတ်သား လို့ ဒီလို ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ ပြေးကြည့်စရာ မလို ဘူး တွဲကြည့်ရင် ခလေး က အစ သိတယ်
5 Replies · 21 mins
Moe Kyaw ဦးဦး အနေ နဲ နိုင်ငံ ရဲ့ တာဝန်
ပါတီ စွဲ လူမျိုးစွဲ
ဆိုတော့ ဘာလို့ 
7 Replies · 19 mins
Hw Aung တပ်တွေပြန်ထွက်သွားဖို့ဆန္ဒပြကြတာရောထည့်ပြောမှပေါ့ရခိုင်တွေဘက်ကကာကွယ်ပေးလို့စစ်သားတွေထောင်ထဲအထည့်ခံရတာလေးပါပြောအကာအကွယ်တော့လိုချင်တယ်တပ်ကိုကြမကောင်းကြံတယ်သာပါတယ်လေ
Aung Khant Thaw ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆက်ဆက်က ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေကို ပစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပေါက်ကွဲနေတာဆိုတော့
27 Replies · 20 mins
Tin Lin လွတ်လပ်ရေးရတယ်ကိုကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲအကျိုးစီပွားကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကမပစ်ပယ်ခဲဘူးရေရှည်စဉ်စားလုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာပျောက်လောက်ပြီအခုလောက်သွေးမကွဲနိုင်ဘူး
Myint Thein အရင်ကတည်းက ဒီလိုအမေးအဖြေလေးလုပ်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် ရှေ့ရေးစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင် 🤔 🤔 🤔 🤔
2 Replies · 55 mins
Koko Myo မြန်မာပြည် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ကိုယ်တော်ကြီးတွေ ရှက်တက်ကြစမ်းပါ
Min Wai Yan ခများကြီးတို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်လားးး
ဘာာာာ အခုမှ တရားခံရှာနေလဲ ရီးးးသေးတယ်
Angelar Hniang သင်​​ကောင်းရင်​ ကျွန်ုပ်​ မဆိုးပါတဲ့ ။ ၂ ဖက်​ စလုံးက တူတူပဲ ။ ကုလားကိုချည်း မဲ မ​နေကြနဲ့။ ကုလားတစ်​​ယောက်​က ရခိုင်​တစ်​​ယောက်​ကို ပြစ်​မှားတာက စပြီး (ပြုသူ ခံရသူ ပုဂ္ဂလိက)အငြိုးက​နေ ရခိုင် နဲ့ ကုလား ပြသနာ စလာတာ။ အမှိုက်​တစ်​စ က တစ်​ပြည်​လုံး​လောင်​ ​နေပြီ။
Kasin Myonaing ခိုးဝင်​ ခိုးဝင်​ နဲ့တချိန်​လုံး​ပြော​နေတဲ့ သူ​တွေကို မနက်​ဖြန်​ အစိုးရက တရားဝင်​ပြန်​သွင်း​တော့မယ်​ ဝင်​လာတဲ့သူ​တွေ ခိုးဝင်​ အ​ခေါ်ခံရအုန်းမှာလား?
Windi Winmaung ဦးရဲ တို့ အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ဒါမျိုးတွေသတိမထားခဲဘူးလား ဘာလို့ အဲ့ အချိန်တုန်းက မတွေးခဲ့ မမေး ခဲ့တာလဲ ခုမှ အိမ်မက် မက်နေတာလားဂယောင်ကတန်းနဲ့ မေးခွန်းတွေမေးနေတယ်ဆိုတော့ ခုမှ အားလို့လား ဟိုတချိန်ကသာဒီလိုအတွေးမျိုးတွေနဲ့ အကြံပေးလုပ်ျဆာင်ပေးခဲ့မယ်ဆို ကောင်းမှာ...ခုတော့ ...
Kyaw Zay Ya သူတို့အားကိုးတဲ့အဖတပ်မတော် aa ဓါတ်ခဲအာမီ ကရခိုင်တွေကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးလား??
aa ကမြန်မာတပ်ကိုပဲတိုက်ဖို့လား?? အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂလိမ်ကုလားကိုအလှကြည့်ဖို့လား ဆိုတာတွေရောမမေးလိုက်ဘူးလားဗျာ....
Thant Win အဲ့ တော့ 
ရခိုင်တွေ အတွက်...See More
Tunnainglinn ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်လုံးဝမရှိ မထားဘူးလား လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲချိန်မှာကုန်စည်ကူးသန်းမှုနောက်ကျရတယ် ဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတယ်
ဒီလိုပဲဒါတွေကနယ်စပ်ဒေသတိုင်းခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေအကုန်ရှိတယ် ရခိုင်တခုတည်းပြည်နယ်မဟုတ်ပြန်ဘူး ရိုဟင်ဂျာ...See More
Aung Kyaw Thu ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း တပ်မတော်ထဲ မဝင်မနေရ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ပါပြီ
ရခိုင် အရေးကြီးဒေသများအတွက် တပ်မ သုံးခုလောက် ဖြန့်ကျက်ပြီး ဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားတွေ စားဝတ်နေရေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
တွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေး နဲ့စက်မှု လုပ်ငန်းများစီမံကိန်းကြီးများဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်
Zaw Myint Naing နံပတ်​တစ်​ကိုတိုင်းရင်းသားတစ်​​ယောက်​အ​နေနှင့်​သ​ဘောတူလက်​ခံပါသည်​။
Tun Aung Kyaw ရခိုင်ပြဿနာက
သောင်း မီးစမွှေးခဲ့တာ ရခိုင်တွေ...See More
Phone Thit ခင်ဗျား ဒီလို ၂ပြား တစ်ပဲတန် သုတေသနယောင်ယောင်တွေ လုပ်ပြီးတော့လဲ လျှောက်ပြောတတ်တာပဲနော် ...
Mg Mg Myint အဲ့ဒါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြသနာပြေ
ရောင်ခြည် ဦး ဦးလပြဲထွဋ် ရယ် အဲဒီလူတွေကို
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်တည်းက
Myo Thu Win တကယ့်လက်တွေ့ကျတော့ ရခိုင်တွေက
တပ်ကိုမုန့်းတယ် ဗမာတပ် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မုန်းတယ်
ဘာမှစောက်သုံးမကျ အားမကိုရတဲ့ သူပုန်AA ကို ထောက်ခံတယ်...See More
လွင် ကိုကို ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လက်မခံနိူင်ရင်ဖင်ခံလိုက်ပေါ့
Nan Tint Mg မင်းရာထူးရှိတုန်းကမစဉ်းစားဘူးလား
တင် ဝင်း ခုမှ သိတာလား
Wunna Soe အဲဒါ မအလကိုသွားပြောပြလေ
KO KO ဒီအကြောင်းတွေကပဲ ဗမာမုန်းတီးရေးဝါဒဖြစ်လာတာထင်တယ်
Soe Soe Goood
Thiri MarMe right
အ ဖြူ စစ် အမှန်​ပါဘဲ
Thuta Soe ထောက်ခံပါတယ်
Tin Ko Ko ရခိုင်​အတွက်​ သ​ဘောထားကြီးနိုင်​ပါ​စေ
Aung Kyaw Soe Yes, of course. I also agree with you.
Soemin Lat ရဲထဋ်​ မင်းက ​စောင့်​ရူးပဲ
Zaw Mon .
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 4:56 PM
Mahayana deity Avalokitesvara or Kuan Ying for Chi...
The Great & Beautiful Lost Kingdoms by William Dal...
မြန်မာပြည်ကို ဒုက္ခပေးဖို့ BBC လိမ်နေပြီ
“ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဆီက ဘာတွေ သင်ခန်းစာယူမလဲ” ဆိုသ...
ရာဇ၀င်ထဲက ပန်ထွာဘုရင်မ နဲ့ သုံးပန်လှမင်းသမီး စ/ ဆံ...
တို့ဗိုလ်ချုပ်ကို အမှန်တကယ် ဘယ်သူသတ်ခဲ့သလဲ (အပိုင်...
သ ခင် စိုး ဇနီး ဒေါ် နှင်း မေ (၉၂ နှစ် ) နှင့် ကမာရ...
လွတ် လပ် တဲ့ ဗမာ ပြည်၊ Independent Burma
လွတ် လပ် ရေး သီ ချင်း ( သီ ဆို သူ ရွှေ ညာ မောင် )
တို့ ဗမာ သီ ချင်း ၂
Doh Bama Song 1 : တို့ ဗမာ သီ ချင်း ၁
အမှားမကင်းတဲ့ပုထုဇဉ် By Sein Htay
ပုပ္ပါး စော ရဟန်း ခေါ် တောင်သူကြီးမင်း သည် သျှမ် လူ...
မဟာ ဝိတိကာရာ ရက္ခပူရ
Can Facebook be implicated in instigation made by ...